Instagram dia mampiditra fiasa vaovao amin'ny fampiharana | Vaovao IPhone
Instagram dia mampiditra endrika vaovao amin'ny fampiharana azy
Vao avy nanambara fanavaozana ny Instagram izay misy ny fampiharana fitaovana vaovao natao hampitomboana ny fiarovana an-tserasera ny sehatra misy azy. Na izany aza, ankoatry ny fanatsarana ny fiarovana, ny fiasa vaovao ao amin'ny kinova vao navoaka vao tsy ela izay dia manolotra fomba vaovao hifaneraserana amin'ny mpanaraka.
Anisan'ireo fiasa vaovao, ny mpampiasa dia afaka mahita iray izay mamela anao hanafoana ny fanehoan-kevitra amin'ireo lahatsoratra tianao. Izany dia zavatra iray izay navelan'ny Instagram, na dia ankehitriny aza, isan-jaton'ny mpampiasa kely fotsiny, fa manomboka izao, ho azon'ny rehetra atao izany fahafaha-mivoaka izany. Azonao atao ny manafoana ny fanehoan-kevitra amin'ny famoahana boky amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "Fivoarana mandroso" ary avy eo amin'ny "Aza avela hanome hevitra". Raha ny fahafaha-manafoana ny fanehoan-kevitra dia sehatra fiarovana lehibe ho an'ireo izay te hisoroka ny fanehoan-kevitra ratsy na mampiady hevitra amin'ny sariny (mpampiasa miaraka amin'ny mpanaraka an'arivony, ohatra), ny fanavaozana koa dia manolotra kisary fo vaovao eo akaikin'ny hevitra tsirairay., izay hahafahanao mankafy ny hevitr'izy ireo izay eo amin'ny sary tsirairay. Instagram dia nanambara fa antenaina fa hamporisika ny vondrom-piarahamonina mankany amin'ny "positivity iraisana ity" ity.
Ho fanampin'izany, ny Instagram dia hampahafantatra ny fahafaha-manala ireo mpanaraka amin'ny kaonty manokana ihany koa. Ny olona sasany ao amin'ny Instagram dia maniry ny hisafidy ny hanana ny kaontiny mitokana, izany hoe mankasitraka ny mpanaraka rehetra izy ireo. Ity dia fomba iray lehibe hanentanana ny olona hizara ny atiny amin'ny namana akaiky sy fianakaviana. Taloha, rehefa nankatoavina ny mpanara-dia iray, tsy nisy fomba fanafoanana izany fanapahan-kevitra izany raha tsy niroso tamin'ny fanakanana azy ireo. Amin'ity fanavaozana ity, raha toa ka napetraka manokana ny kaontinao dia azonao atao ny manala ireo mpikambana ao amin'ny lisitry ny mpanaraka anao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny menio izay hiseho eo akaikin'ny anaran'ilay olona. Tsy hampandrenesina momba ilay hetsika ilay mpanaraka nesorina.
Farany, safidy vaovao hiteny ny kely indrindra ... liana te hahafanta-javatra. Izy io dia rafitra iray hitaterana anarana tsy fantatra anarana momba ny mpampiasa iray izay heverinay fa mety handinika ny safidin'ny famonoan-tena na ny fanimbana tena. Araka ny Instagram: "Manana ekipa miasa 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro izahay, manerana an'izao tontolo izao handinika ireo karazana tatitra ireo. Hiezaka izahay hiara-miasa amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo mpampiasa voalaza fa mifandray amin'ireo fikambanana afaka manome fanampiana ».
Efa mihodina ho an'ireo mpampiasa ny kinova farany amin'ny Instagram ny fanavaozana. Mandroso ny fametrahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Instagram dia mampiditra endrika vaovao amin'ny fampiharana azy
Fanambarana vaovao momba ny iPhone 7 Plus miaraka amin'ny tanora Romeo sy Juliet